Ampinga : hampiakarina ny lentan’ny kabary | NewsMada
Ampinga : hampiakarina ny lentan’ny kabary
Manomboka androany sy amin’ny 27 janoary ary ny 28 janoary ny fampianarana kabary atolotry ny fikambanana Ampinga. Miparitaka amin’ny toeram-pampiofanana efatra izany : eny Ampefiloha, Alarobia, Imerinafovoany ary eny Ambohimangakely. Andiany faharoa amin’ireo mpiofana mandritra ny taona 2017-2018 izany raha toa ka efa niditra ny volana novambra ireo mpianatra amin’ny andiany voalohany.
Tato anatin’ny taona maromaro izay, miroborobo tokoa ny fampianarana kabary, indrindra eto an-dRenivohitra. Azo lazaina ho mifanaraka amin’ny filàna ihany koa izany, indrindra moa eo amin’ny kabary am-panambadiana. Noho izay filàna izay, toa lasa fitadiavam-bola mihitsy ny fikabariana.
Hatreo, tsy misy olana loatra fa ny tsy tokony hadinoina, adidy eo amin’ny mpiara-monina aloha ny fikabariana, araka ny nambaran’i Manampisoatoavina Lalaina, filohan’ny fikambanana Ampinga. Ny hamerina io lentan’ny kabary io indrindra no ho vaindohan-draharahan’izy ireo, mandritra ity taona vaovao ity.
Mikasika ny kabary am-panambadiana ihany, tokony tsy hisy intsony ny « ady » na ny fifampiderana talenta ranofotsiny eo amin’ny mpikabary andaniny sy ankilany, araka ny voalazan’ity mpikabary ity hatrany.
Noho izany, ho an’ny fikambanana Ampinga manokana, anisan’ny hiompanan’ny fampiofanana ny fahaiza-mifidy ny teny avoaka ny vava mba ho teny ifanomezam-boninahitra eo amin’ny samy mpanotrona fa tsy ho teny anehoana fahaizana fotsiny. Miara-dalana hatrany amin’ny fampianarana kabary ny fampahafantarana ny mpiofana ireo soatoavaina malagasy.
Vinan’ny fikambanana ny hanitatra ny toeram-pampianarana amin’ny faritra roa ankoatra ireo efatra efa misy azy ireo, eto an-dRenivohitra sy ny manodidina.